Abụ Ọma 83 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Abụ Ọma 83:1-18
Ekpere ọbụ abụ kpere mgbe ndị iro bịara
“Chineke, biko, agbala nkịtị” (1)
Ndị iro dị ka ahịhịa ogwu ifufe na-ebu (13)
Aha Chineke bụ Jehova (18)
Abụ Esaf.+ Abụ ọma. 83 Chineke, biko, agbala nkịtị.+ Chineke, biko, anọla jụụ,* anọkwala na-ele n’anya n’anya. 2 Lee, ndị iro gị na-eme mkpọtụ.+ Ndị kpọrọ gị asị na-ama gị aka.* 3 Ha ji aghụghọ na-agbara ndị gị izu. Ha na-akpara ndị ị hụrụ n’anya* nkata ọjọọ. 4 Ha na-asị: “Bịanụ ka anyị kpochapụ ha ka ha ghara ịbụkwa mba,+Ka a gharazie icheta aha Izrel ọzọ.” 5 Ha na-eji otu obi agba izu ihe ha ga-eme. Ha agbakọọla aka* ka ha lụso gị ọgụ,+ 6 Ndị Ịdọm na ndị Ishmel, ndị Moab+ na ndị Hega,+ 7 Gibal na Amọn+ na Amalek,Filistia+ nakwa ndị bi na Taya.+ 8 Asiria+ esorokwala ha. Ha na-akwado ụmụ Lọt.+ (Sila) 9 Mee ha ihe i mere Midian,+Ihe i mere Sisera na Jebin n’iyi* Kaịshọn.+ 10 A lara ha n’iyi n’En-dọọ.+ Ha ghọrọ nri ala. 11 Mee ndị a ma ama n’obodo ha ihe i mere Oreb na Zieb,+Meekwa ndị isi* ha ihe i mere Ziba na Zalmọna,+ 12 N’ihi na ha sịrị: “Ka anyị weghara ala ebe Chineke bi.” 13 Chineke m, biko, mee ka ha dị ka ahịhịa ogwu ifufe na-ebugharị,+Ka ha dị ka ahịhịa ọka ifufe na-ebugharị. 14 Otú ahụ ọkụ si agba oké ọhịa,Ire ọkụ ana-erekwa ugwu,+ 15 Si otú ahụ jiri oké ifufe gị chụọ ha ọsọ,+Jirikwa oké ifufe gị yie ha egwu.+ 16 Jehova, biko, mee ka ihere ju ha ihu,Ka ha wee chọọ aha gị. 17 Biko, ka e menye ha ihere, ka ụjọ na-atụkwa ha ruo mgbe ebighị ebi. Ka e mechuo ha ihu ma laa ha n’iyi. 18 Ka ndị mmadụ mara na aha gị bụ Jehova+Nakwa na ọ bụ naanị gị bụ Onye Kacha Elu n’ụwa niile.+
^ Ma ọ bụ “emechila ọnụ.”
^ Na Hibru, “na-eweli isi ha elu.”
^ Na Hibru, “ndị i zoro ezo.”
^ Ma ọ bụ “Ha agbaala ndụ.”
^ Ma ọ bụ “na ndagwurugwu.”
^ Ma ọ bụ “ndị na-edu.”
Abụ Ọma 83